Sidina miafina an'ny F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Sidina miafina an'ny F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
F-117 Mpisolovava Stealth Nighthawk
Na dia nosoloina tamin'ny fomba ofisialy ny jet F-117 Raptor tamin'ny jet ofisialy F-22 Nighthawk Stealth Fighter jet dia toa mbola miasa ihany izy io, miseho ho balafomanga fitsangantsanganana. Raha ny tena izy, ny tantaran'ny Nighthawk dia tsy hoe tsy misy mistery.
Ny famoronana ny Nighthawk dia natao an-tsokosoko nanomboka ny taona 1975.
Tamin'ny 1981 no nalefa voalohany, saingy rakotry ny tsiambaratelo, ary tsy fantatry ny besinimaro ny momba ilay fiaramanidina raha tsy 7 taona taty aoriana.
Taorian'ny nanambarana ny fisotroan-dronono satria nosoloin'ny Raptor izy, dia toa nitahiry ilay fiaramanidina nefa tsy tena nihetsika mihitsy.
Ny Nighthawk dia novolavola Lockheed Martin ho fiaramanidina fanafihana taorian'ny niasa tamin'ny teknolojia miafina. Ny famoronana ny teo alohany, fiaramanidina mpanao fihetsiketsehana antsoina hoe Have Blue, dia natao an-tsokosoko tamin'ny taona 1975.
Tamin'ny 1978 dia niroso tamin'ny fampandrosoana ny F-117A ary nalefa voalohany tamin'ny 1981. Saingy tsy nahalala ny fisian'izany ny vahoaka raha tsy efa nambara tamin'ny fomba ofisialy 7 taona taty aoriana tamin'ny 1988.
Teo anelanelan'ny taona 1982 sy 1988, ny Nightawk voalohany dia natolotra ho fiaramanidina fitokisana voalohany manerantany ho an'ny tafika amerikana (USAF). Izy io dia iray amin'ireo fiaramanidina miafina 59 horaisin'i USAF hatramin'ny taona 1990, manamarika ny farany natolotra.
Ny Air Force amerikana dia nanolo ny F-117 tamin'ny ny F-22 Raptor talohan'ny fanafoanana ny programa F-22 tamin'ny 2009. Nosoloina ilay mpiady F-35 Joint Strike Fighter mora vidy sy marobe kokoa izy io. Ny folo voalohany tamin'ireo fiaramanidina 55 F-117 niasa dia nisotro ronono tamin'ny Desambra 2006. Nisy lanonana fisotroan-dronono fisotroan-dronono natao tao amin'ny Base Air Force Wright-Patterson tamin'ny martsa 2008.
Saingy tsy lasa ireo Nightawks. Voatahiry amina hangar any amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny Tonopah Test Range any Nevada izy ireo. Ny 4 Nightawks farany dia tonga tao amin'ny Test Range tamin'ny 22 aprily 2008. Nesorina ireo elatra sy rambo mba hotehirizina, saingy misy fiaramanidina sasany azo averina haingana amin'ny sidina raha ilaina izany.
Vao tsy ela akory izay dia nanamafy ny zandarimariam-pirenena fa ny F-117 Nighthawks dia ampiasaina amin'ny fanazaran-tena fampiofanana, ao anatin'izany ny asan'ny toeran'ireo balafomanga fitsangantsanganana. Ny porofo dia mampiseho fa io fanazaran-tena io dia efa elaela izay. Satria ny fiaramanidina dia afaka maka tahaka ny hetsika toy ny balafomanga fitsangantsanganana, sehatra iray tonga lafatra izy ireo ho an'ny fiarovana fiarovan-tena.
Mety nahazo ny anarany ilay Nighthawk satria tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny iraka amin'ny alina. Ary amin'ny tsiambaratelo, tsy isalasalana, noho ny tantarany ary na dia ny lokony mainty, izay manamora ny fifangaroana any amin'ny lanitra amin'ny alina. Fa iza no mila mifangaro rehefa afaka tsy ho hitan'ny radar ianao?
Ny habakabaka sy ny mombamomba ny Nightawk dia nohamarinina mba hisaintsainana ny radara fankahalana ho lasa fantsom-baravarana tery tery, izay mitodika lavitra ny mpamantatra radara fahavalo. Ny varavarana rehetra sy ny takelaka fanokafana ao amin'ny fiaramanidina dia manana sisin-tongotra nifamihina sy mandroso izay taratra taratra radar. Ny ety ivelany amin'ny fiaramanidina dia mifono fitaovana manosika radara (RAM). Izany rehetra izany dia mahatonga azy tsy ho hita maso.
Fantatra amin'ny anarana hoe Frisbee sy ny Wobblin 'Goblin, ny iraka ampanaovina ny F-117A Nighthawk dia ny hiditra amin'ny tontolo mandrahona sy hanafika lasibatra avo lenta miaraka amin'ny fahitsiana avo lenta. Nighthawk dia niasa tamina opérasiona miasa tany Panama, nandritra ny Operation Desert Storm, tany Kosovo, any Afghanistan, ary nandritra ny Operation Iraqi Freedom.
Ny fiaramanidina mangingina dia vita amin'ny aliminiôma miaraka amin'ny titanium ho an'ny faritra misy ny motera sy ny rafi-pitsoahana.